बजारमा गिरीमाथि मकै पोलेर एक पैसा, दुई पैसा कमाएका असहाय महिलादेखि जुत्ता सिलाएर पैसा जम्मा पारेका गरिवसम्मको पैसा बढी ब्याज दिन्छु भन्ने लोभ देखाएर झ्वाम पारिदिएको आरोप छ ।
गिरीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय आफ्ना आफन्तकोमा नामसारी गरेको, सम्पत्ति लुकाएको र घरजग्गा समेत राजीनाम पास गरिदिएको बजारको हल्लाहरुलाई समेत निराधार भनेका छन् ।
स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सरोकारवाला पक्ष तथा सम्बन्धित निकायले भने डामाडोल तरहराको आर्थिक सुधारका निम्ति खास चिन्ता र चासो दिएको पाईएको छैन ।
गैरवित्तीय कारोबार गरेको तथा आर्थिक लेनदेनमा सर्वसाधारणको करौंडो रकम डुबाएर उनीहरुलाई विचल्लीमा पारेको आरोप लागेका केशब उर्फ सुमन गिरीले काठमाण्डौंबाट आज साँझ मोबाईल फोन सम्पर्क गर्दै आफु फरार नरहेको र फागुनभित्र सर्वसाधारणसँगको आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक लेनदेनको कारोबार मिलाउने दाबी गरेका छन् ।
सुमन गिरिद्वाराजारि प्रेस विज्ञप्ति
सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नंम्वर २०, तरहरामा स्थानीय सर्वसाधारणको झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ गिरी जस्तै गैर वित्तीय कारोबारी गर्ने स्थानीय सुनचाँदी पसलका व्यवसायी तथा अन्य रेमिटेन्स व्यवसाय संचालकहरुका कारण डामाडोल भएको स्थानीय अर्थ विज्ञहरुले जनाएका छन् ।
उद्योग वाणीज्य संघ, तरहरा शाखाका पूर्व अध्यक्ष तथा रुपाली कर्नर एवं रुद्धाक्ष पार्टी प्यालसका प्रोपाईटर समेत रहेका गिरीसहित स्थानीय केही सुनचाँदी व्यवसायीहरुका बारे पछिल्लो समय केही पत्रपत्रिका तथा अनलाईन मिडियामा निरन्तर नकारात्मक समाचार आएपछि तनावमा देखिएका गिरीले आज साँझ पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता नवीन गुरूङलाई मोबाईल फोन सम्पर्क गर्दै आफुले यहि (२०७६ सालको) फागुन महिनाभित्र सर्वसाधारणसँगको आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक लेनदेनको कारोबार मिलाउने दाबी गरेका हुन् ।
“सयमा लगभग ८० प्रतिशत मिलाईसकेको छु । अब त्यस्तै २० प्रतिशत होला । त्यो पनि नगद वा जग्गा दिएर यो (२०७६ सालको) फागुन महिनाभित्र मिलाउछु ।”, गिरीले आफुमाथि ऋण भएको र त्यो चुक्ता गर्ने आर्थिक र नैतिक क्षमता आफुमा भएको दाबी गर्दै स्पष्ट पार्न चाहे, “रुद्धाक्ष पार्टी प्यालस र मेरा केही जग्गाहरु बिक्री गरेपछि ममाथिको सारा ऋण चुक्ता हुनेछ । बिक्री गर्न समय लागेको मात्र हो, सर्वसाधारणको पैसा (रकम) खाएर भाग्यो भन्नु ममाथिको अतिरञ्जित र नियोजित प्रहार हो । म व्यवहार मिलाउन काठमाण्डौं आएको छु र यहि रहेर पनि कतिपयको रकम फिर्ता गरिसकेको छु ।”
गिरीले आफु सामाजिक व्यक्तित्व भएको र सर्वसाधारणको रकम डुबाएर तरहराबाट भागेको वा विदेश जान खोज्यो भन्ने हल्लाहरु केवल मिथ्या आरोप भएको दाबी गरे । ओरालो लागेको मृगलाई जसले पनि खेद्ने गरेको उनको कथन थियो ।
“सर्वसाधारणको पैसा (रकम) खाएर भाग्ने म कल्पना समेत गर्न सक्दिन । गिरीले दृढ विश्वास दिलाउन चाहे, म उद्योग वाणीज्य संघ, इटहरी तरहरा शाखाका पूर्व अध्यक्ष पनि हु । विभिन्न सामाजिक योगदान छ । अझै पनि म तरहरामा नै रहेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउन सक्छु । म किन भाग्ने ? म कसरी फरार ? मेरो नंम्बर सधैं खुल्ला छ । तपाईहरुले (पत्रकारहरुले) जुनसुकै समय पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।” पीडितले भन्दा पनि विचौलियाहरुले पूर्वाग्रही भई नकारात्मक हल्ला फिजाएको दाबी उनको थियो ।
उनले समाजमा आफुलाई राम्रौं भन्नेहरु पनि रहेको ठोकुवा गरे । एक समय सामाजिक प्रतिष्ठा र ख्याती कमाएका गिरीलाई पछिल्लो आर्थिक लेनदेन काण्डले भने तरहराबाट नै विस्थापित गराईदिएको समाचारहरु मिडियामा आएको छ । गिरीले भने यस विषयमा चित्त दुखाएका छन् ।
“सर्वसाधारणको लेनदेनको हिसाबकिताब मिलाएपछि म तरहरामा बसु वा काठमाण्डौं, यो मेरो स्वतन्त्रताको विषय हो ।”, उनले पत्रकार गुरूङसँग भने, “तर, म तरहरामा नै पुनः व्यवसायमा फर्किन चाहान्छु । किनभने ममाथिको गलत तथा निराधार आरोपहरुलाई चिरेर मैले स्थानीय सर्वसाधारणको ममाथिको विश्वास यथावत राख्नु छ ।”
बजारमा गिरीमाथि मकै पोलेर एक पैसा, दुई पैसा कमाएका असहाय महिलादेखि जुत्ता सिलाएर पैसा जम्मा पारेका गरिवसम्मको पैसा बढी ब्याज दिन्छु भन्ने लोभ देखाएर झ्वाम पारिदिएको आरोप छ । गिरीले भने यो आरोप अस्वीकार गरे ।
“स-सानो रकम सब फिर्ता गरिदिईसकेको छु ।”, पत्रकार गुरूङले बजारको हल्ला बारे गरेको सिधा प्रश्नको जवाफमा गिरीले दाबी गरे, “मकै पोल्ने, जुत्ता सिउनेको पैसा फिर्ता गरिसकेको छु ।”, उनले स-सानो रकमकालाई जग्गा दिन नमिलेकोले नगद नै फिर्ता गरेको दाबी गरे । तर, केही पीडितहरुले भने गिरीले फागुन १५ गतेसम्मको भाका मागेको कुरा बताएका छन् । पीडितसँगको मोबाईल कलको वार्तालाप पत्रकार गुरूङसँग सुरक्षित छ ।
त्यस्तै, गिरीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय आफ्ना आफन्तकोमा नामसारी गरेको, सम्पत्ति लुकाएको र घरजग्गा समेत राजीनाम पास गरिदिएको बजारको हल्लाहरुलाई समेत निराधार भनेका छन् । तरहरा चौकमा रहेको उनको भाई निरकाजी उर्फ शेखर गिरी र उनको संयुक्त बिल्डिङ हाल भाई शेखर गिरीको नाममा नामसारी गरिदिएको चै स्वीकार गरे ।
“भाईको (शेखर गिरीको) जग्गामा घर सट्टापट्टा गरेको हु । शेखरबाट लिएको जग्गा ऋण तिर्नु पर्नेहरुलाई दिईसकेको छु ।”, गिरीले थप दाबी गरे, “यसबाहेक अरु राजीनामा पास गरेको छैन ।”
गिरीमाथि कम मुल्यको जग्गा बढी मुल्यमा भिडाउन खोजेको पनि आरोप छ । यो आरोपमाथि पनि उनले स्थानीय जग्गा व्यवसायीहरुकै तरिकाले विक्री मुल्य राखेको दाबी गरे ।
गिरीमाथि उनको श्रीमत्तीको आफन्तले मास्टर प्लान बनाएर चलखेल गरिरहेको भन्ने आरोप छ । यो आरोप समेत उनले अस्वीकार गरे ।
उनले विदेश भाग्न खोजेको, एयरपोर्टमा पक्राऊ परेको, प्रहरीले पक्राऊ गरेर हनुमान ढोका लगेको तथा काठमाण्डौंको ठमेलमा आफ्नो नातेदारसँगको पार्टनरसिपमा होटलमा लगानी गरेको, काठमाण्डौंमा बिल्डिङ खरिद गरेका जस्ता बजारका अन्य हल्लाहरु समेत ओरालो लागेको मृगलाई सबैले खेद्ने गुनासो गर्दै अहिले आफुलाई सर्वसाधारणको रकम फागुनभित्र चुक्ता गरेर सबै आरोपहरु निराधार भएको प्रमाण गर्न चुनौंती रहेको र आम सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई तथ्यमा रहेर सत्य समाचार संम्प्रेषण गरिदिनका लागि आग्रह गरे ।
गिरीमाथि स्थानीय सर्वसाधारणको ४० करौंड बढी रकम बढी ब्याजको लोभमा पास बुक नै बनाएर बचत गराई गैर वित्तीय कारोबार गरेको तथा आर्थिक लेनदेनमा स्थानीय सर्वसाधारणलाई विचल्लीमा पारेको आरोप छ । गिरीले भने ब्याजसहित गरेर मात्र ४० करौंड बढी रकम आफ्नो थाप्लोमा ऋण परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
गिरीसहित उनी जस्तै गैर वित्तीय कारोबार तथा आर्थिक लेनदेनका कारोबार गर्ने व्यापारी तथा व्यवसायीहरुका कारण सुनसरी जिल्लाको यो इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नंम्वर २० तरहरा, साबिकको हाँसपोसा गाविसको अर्थ बजार हाल डामाडोल छ । किन्तु, स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सरोकारवाला पक्ष तथा सम्बन्धित निकायले भने डामाडोल तरहराको आर्थिक सुधारका निम्ति खास चिन्ता र चासो दिएको पाईएको छैन ।